UMASIPALA UHALALISELA ABAHLOMULE NGAMALAYISENSI OKUSHAYELA – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 Last updated Sep 9, 2021 25
Iphini leMeya kaMasipala wakwaMaphumulo uCllr Zama Ncalane -Mhlongo behambisana nekomiti lakwa Youth&Sport
“Nakuwo lonyaka kuyintokozo ukuhalalisela laba bantu abasha ngempumelelo yokuthola izincwadi zabo zokushayela ezivela kulo loluhlelo. Siyajabula ukubona ukuthi iningi labahlomulile ngabesifazane, njengoba sazi ukuthi abesifazane bebe cindezelekile eminyakeni edlule. Lesi yisibonelo esivelele sokuzibophezela kwethu ukuletha izinsiza nokufukula abantu abasha kwaMaphumulo, futhi sizimisele ngokuqhubeka nemizamo yethu yokufukula abantu abasha endaweni yethu yakwaMaphumulo. Loluhlelo luletha ithemba kubantu abasha, njengoba iningi labo lingasebenzi. Sesiqalile ukubona isivuno esihle kulolu hlelo futhi ngifisa ukuhalalisela abantu abasha ngokubamba leli thuba ngezandla zombili nokuthola amalayisense okushayela, impumelelo yabo kufanele isebenze njengomthombo wokukhuthazo abanye abantu abasha. Ngyafisa futhi nokubaxwayisa ukuthi balalele imithetho yomgwaqo. ” Kusho iPhini leMeya uNcalane-Mhlongo.
UMasipala wakwaMaphumulo uyaqhubeka nokuzibophezela ekuthuthukiseni intsha.